Shir laga yeeshay Amniga Goobo lagu qabanayo doorashada Golaha Shacabka - Radio Risaala: Somali News Online
Home Wararka Shir laga yeeshay Amniga Goobo lagu qabanayo doorashada Golaha Shacabka
Shir laga yeeshay Amniga Goobo lagu qabanayo doorashada Golaha Shacabka
Magaalada Baydhabo ee Xarunta Gobolka Baay waxaa lagu qabtay shirka Amniga degaannada Koonfur Galbeed, kaas oo uu shir guddoomiyay Taliyaha qeybta Booliska Gobolka Baay.
Shirka ayaa waxaa diirada lagu saaray arrimaha amniga degaannada Koonfur Galbeed, iyada oo shirka uu yahay mid todobaadkii halmar la qabto.
Afhayeenka Wasaaradda Amniga Koonfur Galbeed Mustaf Macalin Isaaq ayaa sheegay in shirka sigaar ah diirada loogu saaray sugida amniga Goobaha ay ka dhacayaan doorashooyinka, sida Magaalada Baydhabo iyo degmada Baraawe ee Gobolka Shabeellaha Hoose.
Wuxuu kaloo sheegay in warbixino laga dhageystay Saraakiisha Ciidamada Booliska Koonfur Galbeed & Hay’adaha Caalamiga ah ee dhinaca Amniga ka taageera Maamulka Koonfur Galbeed.
Maamulka Koonfur Galbeed ayaa kamid ah maamulada u diyaar garoobaya doorashooyinka Aqalka Hoose ee Golaha Shacabka, waxaana siweyn loo adkeeyay amniga magaalooyinka Baydhabo iyo Baraawe.
Previous articleMadaxweynaha Jubbaland oo baaq kasoo saaray Abaarta
Next articleGuddiga doorashooyinka Heer Federaal & Booliska Gobolka Bari oo ka shiray Amniga doorashada